Brow Comb Pro Micro Pen 010 | CATRICE COSMETICS
Brow Comb Pro Micro Pen 010
010 Ash Blonde
ထူထဲပြီး ခံငြားလှပသော မျက်ခုံးမွှေးလေးရရှိစေပါတယ်။
Brows on fleek! ဒီမကျြခုံးမှေးဆှဲ ခဲတံက မကျြခုံးကို တိတိကကြနြှငျ့ သဘာဝဆနျဆနျလေး ဖွညျ့ပေးတယျ။ သေးသှယျတဲ့ အမြှငျလေး၃ခြောငျးကွောငျ့ လှပပွီး ထူထဲတဲ့မကျြခုံးဆှဲတဲ့အခါမှာ တဈခကျြဆှဲတိုငျး စိတျတိုငျးကစြတေယျ၊ ပွညျ့စုံစပေါတယျ။ Brow Comb Designer Proက ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ အထိအတှနှေ့ငျ့ professionalတဈယောကျလို ဆှဲနိုငျတဲ့ ထိပျလေးကွောငျ့ မကျြခုံးမှေးဆှဲတဲ့အခါမှာ ဆရာကသြှားစနေိုငျပါတယျ။ တဈယောကျခငျြးစီနှငျ့ လိုကျဖကျညီတဲ့ မကျြခုံးမှေးအရောငျအတိုငျး ရရှိအောငျ ရှေးခယျြဖို့ .. အရောငျ ၅ရောငျ ရရှိနိုငျပါတယျ။
Brows on fleek! ဒီမျက်ခုံးမွှေးဆွဲ ခဲတံက မျက်ခုံးကို တိတိကျကျနှင့် သဘာဝဆန်ဆန်လေး ဖြည့်ပေးတယ်။ သေးသွယ်တဲ့ အမျှင်လေး၃ချောင်းကြောင့် လှပပြီး ထူထဲတဲ့မျက်ခုံးဆွဲတဲ့အခါမှာ တစ်ချက်ဆွဲတိုင်း စိတ်တိုင်းကျစေတယ်၊ ပြည့်စုံစေပါတယ်။ Brow Comb Designer Proက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အထိအတွေ့နှင့် professionalတစ်ယောက်လို ဆွဲနိုင်တဲ့ ထိပ်လေးကြောင့် မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတဲ့အခါမှာ ဆရာကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီနှင့် လိုက်ဖက်ညီတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးအရောင်အတိုင်း ရရှိအောင် ရွေးချယ်ဖို့ .. အရောင် ၅ရောင် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
115 Vote Votes
AQUA (WATER), GLYCERIN, POLYSORBATE 80, STYRENE/ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM CHLORIDE, BUTYLENE GLYCOL, COCONUT ACID, SODIUM LAURETH-12 SULFATE, DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PVP, XANTHAN GUM, AMMONIUM HYDROXIDE, SODIUM CITRATE, PHENOXYETHANOL, DEHYDROACETIC ACID, CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77266 (BLACK 2) (NANO), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES).